#Guddoomiye ku xigeenkii Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo kasoo horjeestay xil ka qaadistii lagu sameeyay - Get Latest News From Horn of Africa
#Guddoomiye ku xigeenkii Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo kasoo horjeestay xil ka qaadistii lagu sameeyay
By On Jan 12, 2019 Last updated Jan 12, 2019
Sayid Cali Sheekh Maxamed oo shir jaraa’id qabtay ayaa qalad ku tilmaamay hanaanka loo soo maray xil ka qaadistiisa waxa uuna sheegay in kaliya Baarlamaanka Soomaaliya ay xilkaasi ka qaadi karaan.
Sayid Cali Sheekh waxa uu sheegay in xubinimadiisa ay soo martay habab kala duwan isla markaana ay ansixiyeen golaha baarlamanka, waxa uu sheegay in sababta waqtigaan keentay xil ka qaadistiisa ay salka ku hayso khilaaf hareeyay xubnaha gudigga sanadkii lasoo dhaafay.
Guddoomiye ku xigeenkii Guddiga doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in 10-ka bishaan ay soo gaartay warqad ka soo baxday xubno ka tirsan Guddiga Madaxabanaan ee doorashooyinka Qaranka oo ku aadan inay xilka iyo xubinnimadii Guddiga uu ka haayay laga xayuubiyay,iyadoona qoraalkaasi uu ku saxiixnaa Guddoomiyaga Guddiga Doorashooyinka Xaliimo yarey.
Waxa kale oo uu sheegay in Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Qaranka ay iyadu qaladaadkeeda ku qaraniyeso waxa uu ku tilmaamay xil ka qaadistaasi sharci darada ah.
Sayid Cali ayaa xusay in dhawaanahaanba guddiga doorashooyinka uu ka dhex jiray khilaaf xarga goostay, ayna gudoomiyaha gudiga ay u horseeday guddigaasi fashil iyo waxa uu ku tilmaamay ceeb.
Sayid Cali Sheekh sidoo kale waxa uu eedayn u jeediyay gudoomiyaha gudigga dooraashooyinka Qaranka Soomaaliyeed Xaliimo Yarey oo uu sheegay in ay ku tagri fashay awoodii gudigga, Musuqmaasuq, keligii talisnimo, cadaalad daro iyo in ay ku fashilantay shaqadii ay qaranka soomaaliyeed u haysay ayuu ku eedeeyay gudoomiyuhu, sidoo kale waxa uu xusay in ay eedo usoo jeediyeen hay’adaha la shaqeeya gudigga.
Ugu danbayn waxa uu sheegay in uusan ku qanacsanayn goaanka ka soo baxay qaar ka mida xubnaha gudigga isla markaana uu dacwad ka dhan ah hor gayn doono golaha baarlaamanka dhamaan cadaymiheediina uu hayo.